किशोर दहाल शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८, २०:४९
कांग्रेसको दशौं महाधिवेशन २०५७ माघ ६-९ सम्म पोखरामा सम्पन्न भएको थियो। यस महाधिवेशनसँगै कांग्रेसको विधान झन् प्रजातान्त्रिक भयो। नवौं महाधिवेशनमा पाँच विकास क्षेत्रबाट एक-एक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान लागू गरिएको थियो। दशौं महाधिवेशनबाट भने केन्द्रीय कार्यसमितिका ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखियो। जसअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहने १८ जना सदस्यको पनि निर्वाचन भएको थियो।
महाधिवेशनमा सभापतिका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामहरि जोशी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। कोइराला यसअघि पनि सभापति थिए, जोशी अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि प्रतिस्पर्धी भएका थिए। तर, देउवा भने नयाँ प्रतिस्पर्धी थिए। ‘देशका अगाडि देखिएका चुनौती सामना गर्ने पार्टी कांग्रेसलाई बनाउन मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। गिरिजाबाबु, म र अन्य साथीहरुलाई पदको पीडा होला, तर माओवादी समस्याका कारण मान्छेको ज्यान गइरहेको छ। पदको पीडा ठूलो कि मान्छेको पीडा ठूलो? तसर्थ अहिले यो ज्वलन्त समस्या हो। महिला, जनजाति, दलित, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी जस्ता समस्या समाधान गर्छु भनेर मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ’, २०५७ माघ ६ गते प्रकाशित साप्ताहिक विमर्शसँग देउवाले भनेका छन्।
१४७७ महाधिवेशन प्रतिनिधि (मतदाता) रहेको सो महाधिवेशनमा कोइराला नै सभापतिमा दोहोरिए। उनले ९३६ मत पाए। प्रतिस्पर्धी देउवाले ५०७ मत र अर्का उम्मेदवार जोशीले १० मत मात्र पाए। सभापतिमा उम्मेदवारी दिनका लागि ७ जना प्रस्तावक र ७ जना समर्थक आवश्यक पर्थ्यो। तर, जोशीले भने आफ्नै प्रस्तावक-समर्थकको मत पनि पाएनन्।
१८ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेलले सर्वाधिक १०१५ मत पाएका थिए। अन्य सदस्यहरुमा शैलजा आचार्य, प्रकाशमान सिंह, खुमबहादुर खड्का, प्रकाश कोइराला, महेश आचार्य, सुशील कोइराला, प्रदीप गिरि, नरहरि आचार्य, अर्जुननरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौला, बलदेव मजगैया, महन्थ ठाकुर, बलबहादुर राई, विजयकुमार गच्छदार, गोविन्दराज जोशी, विमलेन्द्र निधि, चिरञ्जीवी वाग्ले निर्वाचित भएका थिए। सूचीका १२ जना कोइराला पक्षका हुन्। अर्थात् निर्वाचितमध्ये दुई तिहाइ सदस्य कोइराला पक्षका थिए।
सभापति कोइरालाले महामन्त्रीमा सुशील कोइराला र प्रवक्तामा नरहरि आचार्यलाई नियुक्त गरे। साथै, उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी लगायतलाई मनोनित गर्दै केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गरे। जसअनुसार, महामन्त्रीमा सुशील कोइराला, कोषाध्यक्षमा महन्थ ठाकुर, सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी मनोनित भए। त्यस्तै, सदस्यहरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, नोना कोइराला, चक्रप्रसाद बास्तोला, रामशरण महत, रामवरण यादव लगायत मनोनित भए।
दशौं महाधिवेशनमा छलफल र निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको २०५७ पुस २८ को बैठकद्वारा स्वीकृत नीति र कार्यक्रम पनि महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको थियो। ‘विक्रम सम्वत् २००३ सालतिर आफ्नो जन्मकालदेखि नै नेपाली कांग्रेसले मजदूर हडताल, हलो आन्दोलन, सामाजिक भेदभाव र जातिप्रथाको अन्त्य अनि सामन्ती शोषणको विरोधका कार्यक्रमहरुबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको थियो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मौलिक रुपमा नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनको लक्षित वर्ग भनेको समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा थिचिएर रहेको विपन्न वर्ग हो। कांग्रेसको आधार भनेका किसान, मजदूर र दलित-उत्पीडित जनता नै हुन्’, सो नीति र कार्यक्रममा भनिएको छ।
नीति र कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे उल्लेख छ- 'नेपाल-भारत बीचको सन् १९५० को शान्ति एवम् मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गरी परिवर्तित सन्दर्भमा सम्बन्धको नयाँ आधार खडा हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ। साथै, कालापानी लगायतका सीमा विवाद र समस्याहरु कूटनीतिक प्रयासबाटै समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।
महाधिवेशनमा महामन्त्री सुशील कोइरालाले पनि प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। आफ्नो प्रतिवेदनमा उनले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको छहारी पाइरहनु नेपाली कांग्रेसका निमित्त सौभाग्यको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘आफ्ना आदर्श, एवं मूल्य र मान्यताहरुप्रतिको प्रतिबद्धताबाट टाढा हुन थालेपछि कतिपय ठूला-ठूला पार्टीहरुको पनि अस्तित्व संकटमा परेको हामीले देखेका छौं। नेपाली कांग्रेसलाई पनि अहिले त्यो संकटबाट जोगाउनुपर्ने घडी आएको छ। त्यसैले हाम्रो यो ऐतिहासिक दशौं महाधिवेशनमा हामीले हिजोका केही तिक्तता छन् भने तिनिहरुलाई त्यहीँ छाडेर, आफ्ना सानातिना मतभेदलाई बिर्सेर, हामी सबै एउटै परिवारका सदस्य हौं, आफ्नो घर र परिवारलाई हाम्रै एकता, हाम्रै समझदारी र हाम्रै क्रियाशीलताले जोगाउनुपर्छ, आफ्नो घर र आफ्नो परिवार नष्ट हुँदा हामी आफू पनि नष्ट हुने छौं, हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरु नष्ट हुनेछन् भन्ने तथ्यलाई हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
दलहरूको दायरा खुच्याउने निर्वाचन आयोगको कसरत!
सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरु सहज स्थितिमा [मतदाता संख्या, मत र सम्भावित नतिजासहित]
मधेश प्रदेश : ‘फागुन १६’ को प्रस्थानविन्दु ओलीको बहिर्गमनले यसरी बन्यो सहज